Fanafiana mitam-piadiana :: Voatifitra ny mompera iray sendra nandalo sy lehilahy iray • AoRaha
Fanafiana mitam-piadiana Voatifitra ny mompera iray sendra nandalo sy lehilahy iray
Nirefodrefotra ny poa-basy tany Mahitsy, tamin’ny sabotsy hariva, tokony tamin’ny 7 ora sy sasany. Jiolahy mitam-basy mahery vaika voalaza fa tsy latsaky ny dimy no nanafika toeram-pivarotana iray. Lehilahy roa no voatifitra ka isan’ireo ny mompera iray sendra nandalo teo amin’ilay toerana.
Mpivarotra mpamongady ao Soanavela, somary misintaka kely an’i Mahitsy io notafihin’ny jiolahy io, araka ny loharanom- baovao. Nanararaotra tsara ireo jiolahy satria tao anatin’ny aizim-pito tanteraka noho ny faha-
tapahan-jiro Mahitsy iray manontolo. Misy ny efa voasambotra ahiana ho isan’ireo jiolahy taorian’ ny fikarohana nataon’ny zandary any an-toerana.
“Niditra teo amin’ny kibony dia nivoaka any amin’ny lamosiny ny bala nahazo an’ilay mompera. Avy hatrany nodidiana izy taorian’ity tranga ity ary inoana fa efa mihatsara ny fahasalamany amin’ izao. Tompon’andraikitra ao Soanavela io mompera voatifitra io”, hoy ny loharanom-baovao iray avy eo anivon’ny Diosezin’ Antananarivo.
Ankoatra ilay mompera dia isan’ireo naratra mafy ihany koa ny lehilahy iray tompon’ilaytranombarotra. “Voatifitra teo amin’ny vatany ihany koa io lehilahy io saingy araka ny tatitra azoko dia tsy misy atahorana ny ainy. Ny vola rehetra tao amin’ilay tranombarotra nandritra iny sabotsy iny izay andro tsena eto Mahitsy no voalaza fa lasan’ireo jiolahy”, hoy ny lehiben’ny zandary iray.
Hatramin’ny sabotsy ka hatramin’ny omaly dia manao ny ezaka hikarohana ireo jiolahy ny mpitandro filaminana. Misy ny efa voasambotra, omaly saingy mbola olona ahiahiana izany, araka ny loharanom-baovao hatrany.
Voina nateraky ny oram-be :: Toa efa nandindona an’ilay ankizilahy lasan’ny rano ny fahafatesany